How to Hack Other Computer If You Know IP Address ( Ebook ) by Myanmar Black Hacking | Myanmar Black Hacking
0 How to Hack Other Computer If You Know IP Address ( Ebook ) by Myanmar Black Hacking
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရဲ့ IP လိပ်စာသိရုံနဲ့ အဲဒီကွန်ပြူတာထဲကို ဘယ်လိုမျိုးထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး Control လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်လိုပဲ သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
တကယ်ပဲ ဒီနည်းဟာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်မှ သင်ဝေဖန်လိုက်ပါ
၁၀၀% အဆင်ပြေတယ်လို့ တော့ အာမမခံပါဖူး ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဟက်ကင်းလုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် မိမိရဲ့အသိညဏ်ကို ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲ ဘယ်လောက်ထိ target ကိုလှည့်စားနိုင်မလဲဆိုတာ မိမိအပေါ်မှာမူတည်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်
စာအုပ်ကို ဒေါင်းလော့ယူရန် -
Labels: Ebooks . Hacking Tutorials . Knowledge